Opinion | Page 270 | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
နိဗ္ဗာန်ဘုံတစ်ခုရဲ့ နံနက်ခင်းကို မျှော်ကြည့်ခြင်း
Tue 10 Mar 2015 - 17:17
(စတန် ကော်လီမောသည် ဗြိတိန်သတင်းဌာန Daily Mail အတွက် ကိုယ်တွေ့ခရီးသွား မှတ်တမ်းများ ရေးသားသည့် ဆောင်း ပါးရှင် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့ပြီး နောက် မန္တလေးနှင့် ဗန်းမော်ကြားအပျော်စီးသင်္ဘော ခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်သော ကိုယ်တွေ့ခရီးသွား လမ်းညွှန်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ရေးသားခဲ့ပါသည်)
နေပြည်တော်၌ ညစာစားနေသည်ဆိုသော ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း တိုနီဘလဲ၏ သွေးစွန်းသောအလှူငွေ
Tue 10 Mar 2015 - 02:45
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း လေဘာပါတီ၏ နိုင်ငံရေးသမား တိုနီဘလဲက ဗြိတိန်စတာလင် ပေါင်း ၁၀၆,၀၀၀ကို သူ၏ ပါတီ ဖြစ်သော လေဘာပါတီသို့ ယခု အပတ်မှာ လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ထို
Tue 10 Mar 2015 - 00:11
သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ အစိုးရသက်တမ်း လေးနှစ်တာအတွင်း အကြီးမားဆုံး နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းကြီးတစ်ခုကြုံနေပါပြီ။ မတ်လ ၂ ရက်မှ စတင်၍ လက်ပံတန်းမြို့တွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ ပိတ်ဆို့မှုခံထားရသော ဒီမိုကရေစီပညာရေးသပိတ်စစ်ကြောင်း(ပင်မ)က ယနေ့ (မတ်လ ၁၀ ရက်) နံနက် ၁၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ ပိတ်ဆို့ထားမှုနှင့် အခြေအ
Tue 10 Mar 2015 - 00:10
လှံဖျား ပုစဉ်းနား ငဝက်ကကြောက်ချေးပါဆိုတာ ဒါမျိုးလား တော့ မသိ။ အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေပြုပြင်ရေးအတွက် ချီတက်ဆန္ဒပြနေကြသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေအတွက် အထူးစိုးရိမ်နေမိသည်။ ကြားရသည့်သတင်း၊ ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေက ပိုပိုပြီးဆိုးလာနေသည်။ လက်နက်မဲ့ကျောင်းသား နှစ်ရာလောက်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တထောင်လောက်က ဝိုင်
လွှတ်တော်ကြားနာပွဲရောက် တဇောက်ကန်းပါတီ ဥက္ကဋ္ဌကြီး ကျွန်ုပ်
Mon 09 Mar 2015 - 22:26
(တစ်) ကြေးမုံပြင်တွင် ထပ်ဟပ် လျက်ရှိသော ခံ့ညားလှသည့် ကျွန်ုပ်၏ ဥပဓိရုပ်သွင်ကား ရှုလေလေတိုင်း ရှုလိုက်တိုင်းပင် ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင် တင့်တယ်လှပေစွ။ မီးကြွေတိုက်ထားသည့် နံ့သာရောင်ပိုးသားတိုက်ပုံမှာ ကျွန်ုပ်၏ ပြာနှမ်းနှမ်း အသားအရေနှင့် လွန်စွာ လိုက်ဖက်ရုံမျှမက၊ကျွန်ုပ်၏ဖြူစင်သော အဇ္ဈိတ္တအတွင်းစိတ်သဏ္ဌာန်ကို ပို၍ပီပြင်အောင် ထင်ဟပ် ဖော်ပြလျက်ရှိလေ သည်။ ကျွန်ုပ်၏ခါးတွင် ဝတ်ဆင်ထားသည့် အရောင်လက်၍ခေါက်ရိုးမကျိုးသေးသော အမျိုး သမီးဝတ် ချိတ်ထဘီနှင့် ဆင်တူ ယိုးမှား အသစ်စက်စက်ပိုးပုဆိုးသည်လည်းကျွန်ုပ်၏အရွယ်တင်နုပျိုမှုကို အထောက်အပံ့ပြုလျက် ရှိပြန်၏။ ပုဆိုးနှင့် တိုက်ပုံဝတ်ဆင်ပြီး နောက်စက္ကူဘူးငယ်အတွင်းမှ မောင့်ကျက်သရေခေါင်းပေါင်းကိုထုတ်လျက် ကျွန်ုပ်၏ ဦးခေါင်း ထက်ဝယ် အသာအယာဆောင်း လိုက်ပြီးသည့်အချိန်တွင်ကား တည်ကြည်ပြတ်သားမှုကို အစွမ်း ကုန်ပံ့ပိုးလိုက်သကဲ့သို့ရှိလေသ ဖြင့် ကျွန်ုပ်၏ ဂုဏ်သရေသည် ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်ခဲ့လေပြီ။မှန်သားပြင်ထက်ဝယ် လူကြီး၊လူ ကောင်း ကြန်အင်လက္ခဏာအပြည့်ဖြင့် တင့်တယ်ချင်တိုင်း တင့်တယ်နေသည့် ကျွန်ုပ်ကိုယ် ကျွန်ုပ်ရှုမဝ၊ ကြည့်မဆုံး အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်နေရင်း တစ်ကိုယ်တည်းကျိတ်ပြုံးပြုံးမိနေသောကြောင့် လက်စွဲတော်တပည့်ကျော်များ အခန်းတွင်းသို့ ဝင်လာသည်ကိုပင် ရုတ်ခြည်းသတိမမူခဲ့ချေ။ ‘‘ဟာ . . . ဒီလိုဆိုတော့ ဆြာ့ဥပဓိရုပ်ဟာ တောအရက်ကို ကန် သင်းရိုးမှာ ထိုင်သောက်နေတဲ့ပုံနဲ့ လုံးလုံးမတူတော့ပါကလား။ ခံ့ ချက်ဗျာ၊ ခံ့ချက်’’
Mon 09 Mar 2015 - 20:40
တာဝန်ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း အများပြည်သူကြား အပြောများခဲ့ ကြသလို အမေးလည်း များခဲ့ကြ ပါတယ်။
မည်သည့်အမျိုးသားကိုမဆို စကားရပ်မှာ သရုပ်ပျက်တွေကို တာဝန်ပေးလို့ရပါသလား
Mon 09 Mar 2015 - 11:48
၂၀၁၅မတ်လ ၆ ရက်ထုတ် ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာ တွေကို ဖတ်လိုက် ရတယ်ဆိုရင်ပဲ မျက်နှာဖုံးမှာ ပါတဲ့ပုံတွေက စိတ်မကောင်း စရာတွေကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ ကျောင်းသား တွေကို ထောက်ခံပွဲနဲ့ တားဆီးခံရ မှုကန့်ကွက်ပွဲကို မတ်လ ၅ ရက်က ရန်ကုန်မြို့လယ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါ တယ်။ အဲဒီလိုပြုလုပ်တဲ့ကျောင်း သားတွေကို အရပ်ဝတ်တွေနဲ့ အ တူ ရဲတပ်ဖွဲ့က အကြမ်းဖက်နှိမ် နင်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကန့် ကွက်တဲ့ ကျောင်းသားတွေမှာ လက်နက်ဆိုလို့ အပ်တိုတစ် ချောင်းတောင်မပါတာ သေချာပါ တယ်။ ဘာလက်နက်မှမပါတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို အကြမ်းဖက် တာ နောက်ပြန်သွားသလိုဖြစ်နေ ပါတယ်။
Mon 09 Mar 2015 - 11:46
သည်ရက်ပိုင်း အတွင်း ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲမှာ ထူးထူးဆန်း ဆန်း မေးခွန်းတစ်ခုပေါ်လာသည်။ လူတစ်ယောက် နောက်ဆုံးအချိန် နီးကပ်လာပြီဟု သိလျှင် ဘာလုပ် မလဲဆိုသည့် မေးခွန်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်သည်မေးခွန်းကို ကိုယ် တိုင်ဖြေဖို့ ဝေခွဲမရဖြစ်နေ၍ အခြားသူများကို မေးကြည့်သည်။ အ ဖြေကအမျိုးမျိုး။ သို့ပေမဲ့ အဖြေ များက ကျေနပ်စရာမကောင်း။ ဖြေသူတွေကိုယ်တိုင်က အဲသည့် နောက်ဆုံးအချိန်ဆိုသည့် ခံစားမှု မျိုး ရှိမနေကြ။ ဒါကြောင့်လည်း အဖြေများက ဦးနှောက်ဖြင့် လွယ် လွယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်သော အဖြေ များသာဖြစ်သည်။ ဘာပဲပြော ပြော အဖြေကတော့ နှစ်မျိုးထွက် လာသည်။ ကောင်းတာတွေ လုပ် မှာပေါ့ဆိုတာမျိုးနှင့် အို...မထူးပါ ဘူး။ ပျော်သလိုသာ နေလိုက်တာ ပေါ့ဆိုတာမျိုး ဖြစ်သည်။
Mon 09 Mar 2015 - 00:38
စကားပလ္လင် စာရေးသူ၏ အမြဲတမ်းနှင့် ပင်တိုင်အလုပ်မှာ စာရေးဆရာ ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်မျှ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရသော ‘လွှတ် တော်’ ဆိုသည့် အင်စတီကျူးရှင်းတစ်ရပ် ပြန်လည်အသက်ဝင်ရေးတွင် တတ်စွမ်းသမျှ ကူညီသင့်သည်ဆိုသော အမြင်ဖြင့် ယခုလက်ရှိအလုပ် (အမျိုးသားလွှတ်တော် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်) ကို လက်ခံဆောင်ရွက်နေသော်လည်း ယာယီမျှသာ သဘောထားပါသည်။ ယခုစာစုကို ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအနေနှင့်မဟုတ်ဘဲ စာရေးသူတစ်ဦးအနေဖြင့် ရေးခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ယခုစာက ကော်မရှင်အလုပ်ကို ထိခိုက်နိုင်သည်ဆိုလျှင် ထွက်စာတင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။ အကြောင်းများ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စတင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည့် ၂၀၁၃ နှစ် လယ်ပိုင်းလောက်မှစ၍ လွှတ် တော်ရောက်လာသည်အထိ စိတ် ၀င်တစား စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ ပါသည်။ ဘ၀င်မကျသည့် အချက် အချို့ ပါသလောက်ပါသည့်တိုင် အကောင်းအဆိုး ဘာမှမရေးခဲ့ ပါ။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လေးစားသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ (နောင်မှရေး မည်ဟု ‘တေး’ ထားတာတော့ ရှိသည်) အဆိုပါ ဥပဒေကို အ ကြောင်းခံ၍ ကျောင်းသားဆန္ဒပြ ပွဲများ ပေါ်ထွက်လာရာ စာနာစိတ် ဖြင့် စောင့်ကြည့်နေခဲ့သည်။ ပညာ ရေးကိုကျော်ပြီး အထွေထွေသ ပိတ်သို့ ဦးတည်လာနိုင်သည့် ရက်ဒီကယ်အန္တရာယ်ကို မြင်သ လောက်မြင်နေရသော်လည်း တစ် ခုမှ မရေးခဲ့ပါ။ ကျောင်းသားလူ ငယ်အများစု၏ ရိုးသားသောဆန္ဒ ကို လေးစားသောကြောင့် ဖြစ်ပါ သည်။ (တစ်ချိန်တွင်တော့ ဖြစ် စဉ်တစ်ခုလုံးကို အသေးစိတ် ရေး ရန် စိတ်ကူးရှိသည်)
Mon 09 Mar 2015 - 00:01
လာမည့် ၂၀၁၅ရွေး ကောက်ပွဲမှာ လူပြိန်းရွေးကောက်ပွဲဝင်မည်။ လူပြိန်းရွေးကောက်ပွဲဝင် မယ်လို့ ရပ်ကွက်ထဲသတင်းလွှင့် လိုက်တယ်။ ဘယ်နေပါ့မလဲ။ ဝိုင်းပြီးဆော်ပလော်တီးလိုက်သမှစီစီ ကိုညံလို့။ သူတို့ပြောလည်းပြော ချင်စရာလေ။ လူပြိန်းကလည်း ရပ်ကွက်ထဲ ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ်ဆို တော့ပြောလို့ကောင်းပြီပေါ့။ သို့ပေမဲ့ အားပေးသူတွေ လည်းရှိသဗျ။ ကြည့် - ‘မြို့နယ်ထဲကလမ်းတွေခင်း ပေးရင် တစ်မြို့နယ်လုံး ခင်ဗျား ကို မဲထည့်ကြမှာသေချာတယ်’လို့ ပြောသူလည်းရှိတယ်၊‘ရပ်ကွက် ထဲမှာ အတိုးမယူဘဲချေးဗျာ။ ခင်ဗျားကိုမဲထည့်ကြလိမ့်မယ်’လို့ လည်းဆိုကြတယ်။ ‘ကျွန်တော် တို့ပါတီကသာ နိုင်ငံနဲ့လူမျိုး ကောင်းကျိုးကိုသယ်ပိုးထမ်းရွက် နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောပြီး မဲဆွယ် ပေါ့ဗျာ’လို့ဆိုသူလည်းရှိတယ်။
အစိုးရ ပြန်လည်ဖြေဆိုရမယ့် ဘာသာရပ်
Sat 07 Mar 2015 - 20:09
ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီအထွေ ထွေ ရွေးကောက်ပွဲများကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ ကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့ အတွက် ရှစ်လလောက်သာလို တော့တဲ့အချိန်မှာ အာဏာရအစိုး ရရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များကတော့ အမှတ်တွေတစ်မှတ်ပြီးတစ်မှတ် အလျှော့ခံရတဲ့အခြေအနေမှာရှိ နေပါတယ်။ မဲဆွယ်စည်းရုံးချိန် မရောက်သေးပေမယ့် အာဏာရ ပါတီဟာ ကျေးရွာတွေမှာ တစ် အိမ်တက်ဆင်းစနစ်နဲ့ မှတ်ပုံတင် ကအစ ပြည်သူလူထုလိုအပ်ချက် တွေကို ဖြေရှင်းပေးနေချိန်မှာ ၎င်း တို့တင်မြှောက်ထားတဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ လုပ်ရပ်တွေက တော့ ပြဒါးတစ်လမ်းသံတစ်လမ်း ပါပဲ။
မြို့တကာ၊ နယ်တကာအဆုံး ကျေးရွာအနှံ့ဆီ
‘‘ကျန်းမာကာ လူအများ စိတ်ပျော်ရမည်xxx အများပြည်သူလူထု အကျိုးကို အမြဲဆောင်ရွက်မည် xxx တို့ ကြက်ခြေနီxxxတို့ ကြက်ခြေနီ အများအကျိုးထမ်းရွက် ခဲ့ကြသည်’’
Sat 07 Mar 2015 - 20:04
(တစ်) ‘လေခမြေသက် ဈာန်ဝိတက်သို့ သစ်ရွက်ရော်ရီ ဣန္ဒနီဝယ် သိင်္ဂီတစ်ဝက် ဘက်၍ဆေးစုံ ခြယ်သောပုံသို့ ရဂုံမြိုင်တွင်း တောလုံးလင်း’ဟူပေ၏။ ကောင်းလိုက်တဲ့စာသား။ လှလိုက်တဲ့စာသား။ အရသာရှိလိုက်တဲ့စာသား။ ကျက်သရေကိုရှိပါပေတယ်ဗျာ။ အဲသဟာ ဘယ်ကဗျာထဲကစာသားမှတ်လို့တုံး။ ဟင်း . . . တောလားကြီးထဲကခင်ဗျ။ တောလား။ ရှင်ဥတ္တမကျော်ဆိုတဲ့ ကဗျာ့ဝိဓူပါရဂူဆရာတော်ဘုရားက သီကုံးဖွဲ့နွဲ့တော်မူခဲ့တဲ့တောလားကဗျာကြီးထဲက စာသားတွေပေါ့။
Sat 07 Mar 2015 - 18:29
(၁) ယနေ့အချိန်အခါတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံး၌ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာကဏ္ဍသည် ထိပ်တန်းအရေးပါလျက်ရှိပါသည်။ သတင်းအတွက်လည်းကောင်း၊ ပညာရပ်အတွက်လည်းကောင်း မီဒီယာမျိုးစုံကို အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ အီလက်ထရွန်နစ်ကိရိယာများနှင့် ပေါင်းစပ်ယှဉ်တွဲ၍ လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဦးတည်ကြိုးပမ်းနေကြပါသည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုတွင် သတင်းစီးဆင်းမှု မြန်ဆန်လွတ်လပ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။
Sat 07 Mar 2015 - 18:12
Sat 07 Mar 2015 - 17:28
Sat 07 Mar 2015 - 17:02
(တစ်) ကမ္ဘောဒီးယားမှာ ခင်ဗျား မကြိုက်ဆုံးသောအရာကို ပြောစမ်းပါဆိုလျှင်ဖြင့် ကျွန်တော်ကတော့ အုန်းနို့ကိုပဲပြောချင်ပါသည်။ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ပြဿနာများအတွက် ဘေးအန္တရာယ်များပြားလှသည့်အတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း၌ အုန်းနို့ကို ရှောင်ကွင်းနေကြသည့်အချိန်မျိုးမှာ ခမာနိုင်ငံတော်မှာက အုန်းနို့ကို လှိုင်လှိုင်ကြီးစားသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါသည်။ စားဖို့သောက်ဖို့အတွက် စားပွဲဝိုင်းမှာ ထိုင်လိုက်တိုင်း စိုးတထိတ်ထိတ်ဖြစ်ရသည်က အုန်းနို့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါသည်။
အခေါင်းအိမ် တလားတိုက်နှင့် ဂျင်နိုဆိုက်မှအပြန်
Sat 07 Mar 2015 - 16:14
ယခင်ဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း စာရေးသူဟာ ၂၀၁၅ ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်မှ ၂၆ ရက်အထိ ဟောင်ကောင်မြေမှ အိမ်ရာစီမံကိန်းများကို လေ့လာခဲ့ရာမှာ ဘယ်လိုမှမေ့ပျောက်လို့မရနိုင်တဲ့ အိမ်အမျိုးအစားကတော့ Coffin Home လို့ခေါ်တဲ့ အခေါင်းအိမ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မီးခြစ်ဘူးတွေထောင်ထားသလို အပြိုင်အဆိုင်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ အထပ်မြင့်မိုးမျှော်တိုက်ကြီးများရဲ့ အိမ်ခန်းငယ်များထဲမှာ လူတစ်ကိုယ်စာတွားသွားပြီး အဝင်အထွက်ပြုရတဲ့ ‘‘အခေါင်းအိမ်’’လေးတွေမှာ နေရရှာတဲ့ ဟောင်ကောင်သားရဲ့ဘဝဟာ ‘‘ကောင်းကင်ဘုံကိုမျှော်၍ ငရဲသို့ရောက်ခြင်း’’အစစ်အမှန်ပါပဲ။
တာဝန်ရှိ လူမိုက်များ အငှားလိုက်သည်
Fri 06 Mar 2015 - 20:41
ကျုပ်တို့ ရွှေပြည်ကြီးမှာ ဒီရက်ထဲ ကြားရတဲ့သတင်း၊ တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေက တယ်ပြီးမလှဘူးဗျာ။ အထူးသဖြင့်တော့ လက်ပံတန်းကရန်ကုန်ကိုဝင်လာဖို့လုပ်နေတဲ့ သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားတွေကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက အင်နဲ့ အားနဲ့ ပိတ်ဆို့ထားတယ်။ သို့ ကလို ပိတ်ထားတော့ ကျောင်း သားတွေလည်း ဘယ်ဆက်ချီ တက်လို့ရမလဲ။ ဒီတော့ကာ ထိုင် သပိတ်ဆိုပြီး မှောက်နေရတာပေါ့ဗျာ။ လျှောက်သပိတ်မှ ခွင့်မပြုမင့်ဟာကိုး။
ပြည်သူတွေအပေါ် စေတနာ မထားကြတော့ဘူးလား
Fri 06 Mar 2015 - 20:40
ယခုလအတွင်း ဆက်တိုက်ဆိုသလို သတင်းဆိုးတစ်ပုဒ်နဲ့ ပို၍ ဆိုးသောသတင်းတစ်ပုဒ်ကို နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာတစ်စောင်မှာ ဖတ်ရှုလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီ သတင်းနှစ်ပုဒ်စလုံးဟာ အများ ပြည်သူအားလုံးနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက် စပ် သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ စာ ဖတ်သူတို့လည်း အဲဒီသတင်းဆိုး နှစ်ပုဒ်ကို ဖတ်မိကောင်း ဖတ်မိ ပြီးသား ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။